UHuiyu fluid waya kwi-Analytica 2018 eMunich Germany. Idokodo likaHuiyu, i-B1.528-6 #, Amapompo wethu wekhwalithi angabizi kakhulu ajabulisa amakhulu ezivakashi eziqeqeshiwe. Mayelana ne-Analytica I-analytica ehamba phambili yokuhweba emhlabeni ibiyisiqinisekiso sakho sokwethulwa ngempumelelo kwe-laboratory entsha te ...
UHuiyu fluid waya e-BCEIA2019 futhi uzoya e-BCEIA2021 eBeijing. . Vakashela idokodo likaHuiyu, 6A011 #, ukuze ufunde ngesampula yokusebenza kweNkampani iPeristaltic Pump eyenzelwe ukwelashwa kwamanzi, ilabhorethri, ucwaningo lwesayensi kanye nezicelo. Ngaphezu kwalokho, woza uvakashele idokodo lethu ukuze uthole okuningi d ...
Eminyakeni yakamuva, ngokuthuthuka okuqhubekayo kwezimboni kanye nokwanda kwamadolobha, umnotho wezenhlalakahle uthuthuke ngokushesha, kepha inkinga yokungcola elandelayo ibe yinkinga ebalulekile edinga ukuxazululwa ngokushesha. Ukuphathwa kwendle kancane kancane sekubaluleke kakhulu kwezomnotho ...